Yazi Iingcebiso ezi-5 eziPhezulu zokusebenzisa iPinterest ▷ ▷️ Abalandeli ▷ ➡️
Yazi iingcebiso ezi-5 eziphambili zokusebenzisa iPinterest
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 340
Ngaphandle kwamathandabuzo, izixhobo zonxibelelwano zezona zihlobo zibalaseleyo zabantu namhlanje kuzo zonke izinto ezilungileyo kufuneka unikele. Ngapha koko, enkosi kolu hlobo lwesicelo, abasebenzisi banokuwafezekisa amaphupha abo kwaye bade baphucule kuzo zonke izicwangciso abanokuthi bazinike kwaye bazifumane.
Olunye uncedo oluye ngokungathandabuzekiyo luphucule ukusebenza kwesiqhelo phakathi kwabasebenzisi kukudalwa kwePinterest. Esi sixhobo yenye yezona zinto ziyilayo, kodwa ngaphezulu kwayo yonke le nto, inike abantu ithuba lokuba babone ukuba izinto zabo ziya kujongeka njani kwixesha elizayo ukuba bazama kangangoko.
Kuba akukho mntu uyimfihlo kunamaphepha e-Instagram, iTik Tok kunye neFacebook Bezinye zezona zinto zifunwayo emva kwale mihla ngenxa yentshukumo abayinikelayo. Nangona kunjalo, iPinterest ayizityeshelanga izibonelelo abazibonelela kubasebenzisi be-Intanethi ukubafundisa yonke into ekufuneka bayenzile ngenxa yobukrelekrele babenzi bemxholo.
Iingcebiso zokusebenzisa iPinterest
Kubalulekile ukukuqonda oko IPinterest lelinye lawona maphepha aluncedo Kule mihla, kunye namakhulu ezigidi zabasebenzisi ababhalisiweyo, kunokwenzeka ukuba ufumane izibonelelo ezithile. Nangona kunjalo, kulungile kakhulu ukuba ufunde ukuphucula izakhono zakho esele zikho kwinethiwekhi kancinci kancinci.
Yenza izikhonkwane zoqobo kwiPinterest
Izikhonkwane zePinterest lupapasho owabelana ngalo kwinethiwekhi kwaye uyaziwa eqongeni. Ukuba unemibono emininzi oza nayo kwaye ubonise abanye abantu, ke licebo elihle ukuba wabelane ngalo kwiphepha.
Sebenzisa amaqhosha onxibelelwano
Ukwenza izimvo onazo kwiphepha elaziwa kumaqonga ohlukeneyo onxibelelwano kunokwenzeka. Ndiyabulela kule nto, amaqhosha aya kusebenza njengendlela yokwamkela eyabanye abantu.
Kule meko, kuya kufuneka kuphela ukuba ubenze basebenze kwiPinterest kwaye ungathumela umxholo ngonqakrazo olunye. Abasebenzisi bamanye amaphepha baya kuba nakho ukubona ukujonga okufutshane emfanekisweni kwaye ukusuka apho uqondiswe kwiprofayile yakho kwiphepha lasekhaya.
Yabelana ngeebhodi kwiPinterest
Ukugcina iliso lonxibelelwano, enye yezinto onokuzenza kukwenza ibhodi kunye. Abantu baya kuba nakho ukukufumana kwabanye abasebenzisi kwaye ukusuka apho funda ngakumbi ngayo yonke into onokunikela ngayo.
Hlela izinto ofuna ukuzibona
Ekuqaleni kweseshoni nganye, iPinterest ibonelela ngesixhobo sokuhlela umxholo ukuze ukwazi ukubona ngokuqinisekileyo ukuba yintoni na onayo okanye ofuna ukuyibona eqongeni. Izimvo ziya kubonakala xa ungena kweli phepha.
Ukuba ufuna ukutshintsha into, ungaya kuseto lwePinterest kwaye ufumane iindlela ezingcono ezijolise kukuqonda kwakho.
Sebenzisa iiwits zakho kwiiyure eziphambili
Iindlela zonxibelelwano ayisebenzi ngalo lonke ixesha kwiPinterestKe ngoko, kuya kufuneka ufumane ixesha eliqhelekileyo kunye nabantu abaninzi ukuze ubone umxholo wakho. Ngale ndlela yonke into ekufuneka uyibonisile inokwenziwa yaziwe kakhulu.
1 Iingcebiso zokusebenzisa iPinterest
1.1 Yenza izikhonkwane zoqobo kwiPinterest
1.2 Sebenzisa amaqhosha onxibelelwano
1.3 Yabelana ngeebhodi kwiPinterest
1.4 Hlela izinto ofuna ukuzibona
1.5 Sebenzisa iiwits zakho kwiiyure eziphambili